Ku soo noqo shadii Oslo iyo waxaanu la kulanay. Maxaanu soo aragnay, Waraysi, Mucjiso. | Dhageyso Idaacada maalinkasta oo sabti ah saacada magala Oslo: 20:00-23:00
Ku soo noqo shadii Oslo iyo waxaanu la kulanay. Maxaanu soo aragnay, Waraysi, Mucjiso.
← kaltuun Mahamed Hussien oo laga qaatey 8 caruur ah
Deeq waxbarasho oo lagaadhsiiyey Schoolka Gorey oo ku yaala duleed Gabiley →